မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 10/01/2013 - 11/01/2013
Photo Source : http://kdramafighting.blogspot.sg/2013_05_01_archive.html
မြန်မာပြည်မှာ ထွက်သမျှ ကိုရီးယားကို မြန်မာစာတမ်းထိုးနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေကို ပေါမှပေါဝယ်လို့ရလို့ အားကျမိပါတယ်… အဲဒိအတွက်ကြောင့် မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လောက်တော့ ကိုရီးယားကားကိုသိကြပါတယ်… ကိုယ့်ထက်တောင် သိရင်သိမှာပါ… တစ်ခါတစ်လေ ကြုံလို့ တီဗွီဝင်ကြည့်ရင်တောင် ကျွန်မ မသိတဲ့ကားတွေပြနေတတ်သေးပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေ သူတို့မြန်မာနာမည်နဲ့ ကိုရီးယားကားကို ပြောရင် ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ အစဖော်မရအောင်ဖြစ်မိပါတယ်… ကားကို ပြတော့မှ အော်… ဒါက အင်္ဂလိပ်လို …. ခေါင်းစဉ်ပါလား… ဘာသာပြန်ချက်က လန်ထွက်နေတော့ လုံးဝကို ဆက်စပ်လို့ မရတာပါ… ဒီတော့ ရုပ်ရှင်အကြောင်း ပြောဖို့တောင်မှ သူကြည့်ပြီးတဲ့ကားနဲ့ ကိုယ်ကြည့်ပြီးတဲ့ ကားကို ကိုက်ဖို့တောင်မှ အတော်ခက်ပါတယ်…. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ကြည့်ပြီးတဲ့ ကားကောင်းလေးတွေ recommend ပေးချင်ရင်တောင်မှ မြန်မာလို ခေါင်းစဉ်မသိတော့ ပြောပြလို့မရပါဘူး…
မြန်မာပြည်က ကားနာမည်တွေကို ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး ပြန်ပုံရပါတယ်… ဘာသာပြန်ထားတာ တစ်ချို့ဟာလေးတွေဆို မူရင်းနာမည်ထက်တောင်ကောင်းပါသေးတယ်… ဒါပေမဲ့ မူရင်းနာမည်နဲ့ လုံးဝ ဆက်စပ်မှုမရှိတာတွေကျတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း Online မှာ အဲ့ကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သတင်းရှာဖို့တောင် လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး… ဒါနဲ့ မဗေဒါရဲ့ ဖေ့ဘွတ် Page (https://www.facebook.com/mabaydarPage) မှာ အဲဒိအကြောင်းလေး status တင်ပြီး ကိုယ်သိသမျှ လစ်လုပ်မိပါတယ်… တခြားသူတွေကိုလဲ သိရင် list ထဲမှာ ပြောပြဖို့ အကူအညီတောင်းမိပါတယ်…
ခု အဲဒိ List ကို A to Z အစဉ်လိုက် စီပြီး ပေါင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်… နောက်ဆို English title ပဲ သိတဲ့ ကျွန်မလို လူတွေ မြန်မာပြည်က လူတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းအကြောင်းပြောချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်…
ဇာတ်လမ်းရှာဝယ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လွယ်ကူသွားမှာပါ… ဒီ list ထဲမှာ မပါသေးပဲ ထပ်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ Comment မှာ ထပ်ဖြည့်ပေးသွားပါ… နောက်ထပ် ၅၀ ကျော်ရရင် ပေါင်းပြီး ထပ်တင်ပေးပါအုံးမယ်…
ဒီ List ကို အဓိက ကူညီ ပေးကြတဲ့ Thant Swe နဲ့ Mady June ကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…
(စာကြွင်း… ဒီ list ထဲက ကားတော်တော်များများတောင် မဗေဒါ မကြည့်ရသေးပါဘူး)
49 days = အသက်ဆက်မျက်ရည်
All about eve = ဆည်းဆာ ရင်ခုန်သံ
Alone in Love = အချစ်ပြီးတော့အချစ်
Autumn tale = ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ချစ်သက်သေ
Beethoven Virus = သံစဉ်များနှင့်ကခုန်ခြင်း
Behind the White Tower = ဖြူစင်ခြင်းနောက်ကွယ်
Bodyguard = သက်တော်စောင့် (တော်သေးတာပေါ့ “အချစ်တွက် အသက်ပင်သေသေ” တို့ ဘာတို့ မပေးလို့)
Chosun Police= လျှို့ဝှက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်
City Hunter= အချစ်တိုက်ပွဲ (ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ သိပ်မကိုက်ဘူးထင်တာပဲ)
Dating Now= သံယောဇဉ်
Delicious proposal = အချစ်ဆုံးအတွက် ဟင်းတမယ်
Dream = အိမ်မက်ကာရံ
Four Gold Chasers = ရတနာသိုက်ရှာပုံတော်
Freshion seventies = ဖက်ရှင်ချစ်သူ
Full house = ချစ်စံအိမ် (ဒါက နည်းနည်း နီးစပ်သေးတယ်)
Get Karl! Oh Soo-jung = ချစ်သူလှည့်စား
Gourmet = စားတော်ကဲ
Hero = ဂျာနယ်လစ်ကိုကို (သူရဲကောင်း ကနေ နာမည်ကို Journalist OPPA လို့ ပြောင်းရတော့မယ့်ပုံပဲ)
Hometown Legends (2008) = ကိုရီးယားရိုးရာတစ္ဆေပုံပြင်များ
Honourable Baek Dong-soo = ဘဝတမ်းချင်း
Hotelier = ဟိုတယ်ချစ်သူ
Hwang Jin Yi = ပျော်တော်ဆက်
Il-Ji-Mae: The Phantom Thief = ဒဏ္ဍာရီထဲက ပုံပြင်လေးတပုဒ် (ကဗျာဆန်ချက်က ၉လောက်ရှိတယ်… )
It's ok Daddy's girl= အနှိုင်းမဲ့
La Dolce Vita = အချစ်နွံ
Legend = မြင့်မြတ်နှလုံးသား
Lonely bird= ငှက်ကလေးရဲ့ကောင်းကင်
Love & Marriage = အောင်သွယ်တော်မလေးရဲ့ ဖူးစာရှင် (အချစ်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလို့ ဘာသာပြန်ရင် စိတ်ဝင်စားမှုနည်းမှာစိုးလို့ထင်တယ်)
Love story in Harvard = တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်
Loving forathousand year= ရင်ခုန်တိုင်းချစ်တယ်
Loving you = ရေသူမလေး ချစ်ပုံပြင် (ဘယ်က ရေသူမပါလာလဲ မသိဘူး)
Marry Me, Mary= ချစ်ခွန်းခြွေတဲ့ သံစဉ်ည (Picking Love in Melodious Night? Hee hee )
Master's Sun = ဝိဥာဏ် သတို့သမီး (ghost bride? ဒွတ်ခ မင်းသမီးလဲ သရဲလုံးလုံးဖြစ်)
My Fair Lady = မမလေးရဲ့သက်တော်စောင့်
My happy home= သုခရိပ်မြုံ
Painter of the Wind = အလွမ်းပန်းချီ
Pretty mom= အရိပ်စစ်
Queen Seondok = ၇စင်ကြယ်နဲ့ အသက်ကယ်ဓား (ဘာသာပြန် အရမ်းတော်တာပဲ)
Rock Rock Rock (Drama Special Series) = ရော့ခ်အင်ရိုး…ချစ်သူ
Rude Women = ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည် (မိန်းမရိုင်းကနေ ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်တဲ့… ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းအရတော့ ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်က ပိုလိုက်ဖက်မယ်ထင်တယ်)
Sharing Inheritance = နှလုံးသားစေညွှန်ရာ
Snow Queen = နှင်းပွင့်ဧကရီ (ဒါလေးကတော့ ဘာသာပြန်တာလေး လှတယ်)
Soul/Spirit/Ghost = ၀ိညာဉ်ခေါ်သံ
Summer Scent = ကျောက်မဖြစ်တဲ့ နှလုံးသား ရုပ်ကြွင်း (ဒီနာမည်ကို ပြောပြတဲ့ ချမ်းမြေ့ခိုင်က ဘာသာပြန်တာ ကြိုက်လွန်းလို့ မှတ်မိနေသတဲ့ :P)
Swallow the Sun = ချစ်သူ့ရင်ခွင် (၂)
Swallow the sun= မျှော်လင့်ခြင်းရောင်ခြည် ( ရုပ်ရှင်နာမည် ပြောပြတဲ့ ၂ယောက် ၀ယ်တဲ့ DVD ဆိုင် မတူဘူးထင်တယ် နာမည် ၂မျိုးရှိတယ်… မြန်မာပြည်အချင်းချင်းတောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘာကားကြည့်ပြီးပြီလဲ ပြောပြဖို့ ခက်မယ်)
Temptation of an angel = အဆိပ်သင့်နှင်းဆီ (Poisonous Rose ? ^_^)
The Last Match = အသည်းစိမ်းသလားကွယ်၊ ပွဲသိမ်းကစားမယ် (ကာရံနဲ့တောင် နာမည်ပေးလိုက်သေးတယ်… “နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲ” လို့ နာမည်ပေးရင်တောင် Plain ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ထင်တယ်)
The Man Who Can't Get Married = လူပျိုကြီးမဖြစ်လိုပါ
The woman who still wants to marry = အချစ်ကိုသိချိန်
Three leave clover= သစ်ရွက်လေးရဲ့ ရင်ခုန်သံ
Triple = ပန်းသုံးပွင့်ဒိုင်ယာရီ
Who are you (2013) = ချစ်သူ့ဝိညာဉ်
Will it snow at Christmas = နှင်းပွင့်သစ္စာ
World Within = ရင်ထဲကအနုပညာ
You are beautiful = အိမ်ဂျယ်ချစ်သူ
Posted by mabaydar at 3:25 PM 14 comments :
Posted by mabaydar at 11:38 AM7comments :